နေရာပေးခြင်းမခံရတဲ့ လူပုလေးတို့ - JAPO Japanese News
လာ 13 Jan 2020, 11:20 မနက်
နပန်းသတ်ပွဲလို့ခေါ်တဲ့ ကစားနည်းတစ်မျိုးကို သိပါသလား?
သန်မာတဲ့ယောက်ျားအချင်းချင်း တိုက်ခိုက်ကစားခြင်းမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တခြားကိုယ်ခံပညာတွေနဲ့မတူဘဲ တစ်ဖက်လူရဲ့ လှုပ်ရှားမှု တိုက်ခိုက်မှုတွေကို သည်းခံရပြီး အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်လာတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘက်ကလည်း ရှိသမျှအားအကုန်နဲ့ ပြန်တိုက်ခိုက်ရခြင်းမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်၀င်စားဖို့တော့ကောင်းပါတယ်။
အဲ့ဒီ နပန်းသတ်ပွဲရဲ့ အရှေ့ဆုံးခုံမှာထိုင်ပြီး၊ အဓိကပွဲမတိုင်ခင် စိတ်လှုပ်ရှားရတဲ့ ပွဲအနေနဲ့ကတော့၊ လူပုတို့ရဲ့ နပန်းပွဲကလည်း အပါအ၀င် ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
သူတို့တွေဟာ တော်တော်လေးကို အသက်ကြီးနေကြပါပြီး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့မှာ dwarfism ဆိုတဲ့ရောဂါရှိပါတယ်။ တော်တော်များများက အသက် ၇ နှစ်လောက်မှာ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ကြီးထွားမှုဟာ ရပ်တန့်သွားပါတယ်။
သူတို့တွေဟာ လူကြီးတစ်ယောက်လိုပဲ အသိစိတ်တွေရှိနေပေမဲ့၊ လှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ အရမ်းကို ချစ်ဖို့လည်းကောင်းသလို ဟာသလည်းဆန်ပါတယ်။ ဒါကိုမြင်တဲ့သူတိုင်းဟာ အုပ်အုပ်ကြပ်ကြပ်နဲ့ အားပေးကြပါတယ်။
ဆူဆူညံညံဖြစ်လာပြီး၊ တီဗွီအစီအစဥ်တွေမှာ လွှင့်ခြင်းကို အပိတ်ခံလိုက်ရတာကနေ လူပုနပန်းသတ်ပွဲဟာ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တာပါ။
စိတ်ကတော့ လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပေမဲ့ လူပုအနွယ်၀င်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Mr.Porn , 猪瀬（いのせ）ကတော့ လူပုနပန်းပွဲဟာလည်း အားကစားတစ်ခုပါပဲ လို့အခိုင်အမာပြောပါတယ်။
ပုံတွေကိုကြည့်ပြီး သိနိုင်သလိုပဲ၊ သူ့တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ သူ့ဟာနဲ့သူတော့ အချိုးကျကျ ရှိနေတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံရဲ့ ပြဿနာကတော့ ရယ်ချင်စရာကောင်းပေမယ့် သူတို့မှာလည်း သူတို့ကျွမ်းကျင်မှုပညာနဲ့ သူတို့ရှိကြတယ်။
အဲ့ဒီလို နပန်းပွဲတွေမှာ ကျွမ်းကျင်စွာနဲ့ လူတွေကိုရယ်အောင်လုပ်ပေးရတာလည်း သူတို့ရဲ့ အသက်မွေး၀မ်းကြောင်း တစ်ခုပါပဲ။
သူတို့တွေဟာလည်း ပုံမှန်လူတွေလို အလုပ်ကြိုးစားကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Mr.Porn ဟာ အလုပ်ကနေအနားယူသွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဒီလို ပြောခဲ့ပါတယ်။
အကောင်ကြီးတဲ့လူတွေကိုတော့ တတ်စွမ်းနိုင်တယ်လို့ထင်ပြီး၊ လူပုတွေကိုတော့ စွမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ ဘာလို့ ထင်ရတာလဲ…?
ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစနဲ့ ထွန်းလင်းနိုင်ပေမဲ့၊ လူအဖွဲ့အစည်းတွေက လက်မခံပေးကြတဲ့အခါ လူပုတို့ရဲ့ နပန်းကလည်း ပျောက်ကွယ်သွားရပါတယ်။
ဒါဟာ အသက်ရှင်ရတာရော အလုပ်အကိုင်အတွက်ပါ ရှုံးနိမ့်ရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိဟာ လူရာမ၀င်သူတစ်ယောက် မို့လို့လား…?
ရှုံးနိမ့်သွားရတဲ့ နေရာမှာပဲ တစ်သက်လုံးလက်မြောက်အရှုံးပေးနေရမှာလာ…?
မသေခင်တော့ လူတွေရဲ့ အသိအမှတ်ပြုခံရအောင် တစ်ကြိမ်လောက် ပြန်ကြိုးစားကြည့်ချင်တယ်။
အဲ့ဒီလို သူပြောနေတာကြားပြီး ဆူညံ့မှုတွေပြုတဲ့ လူအုပ်ကြီးက၊ ပြောင်းပြန် လူပုလေးတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ပြန်အတုခိုးရပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ လူ့အခွင့်အရေးကိုမပေးဘဲ ခွဲခြားဆက်ဆံတယ် ဆိုတာကို ထောက်ပြသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်အမြင်နဲ့ ကိုယ်တွေးရမှာမဟုတ်ဘဲ၊ အဲ့ဒီလို လူပုတွေရဲ့နေရာကနေ ၀င်ကြည့်ပြီး ကိုယ်ချင်းစာတွေးကြည့်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူပုတွေဟာလည်း လူထဲကလူအနွယ်၀င်ဖြစ်ပေမဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ နေရာပေးခြင်းမခံရတာက စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ……။
မျက်မှန်တပ်ခွင့်မရှိတဲ့ ဂျပန်လုပ်ငန်းခွင်တွေများတယ်ဆို ?